Wararkii ugu dambeeyay Saraakiil lagu laayay duleedka magaalada Jowhar +Magacyada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay Saraakiil lagu laayay duleedka magaalada Jowhar +Magacyada
Wararkii ugu dambeeyay Saraakiil lagu laayay duleedka magaalada Jowhar +Magacyada
Jowhar (Halqaran.com) – Afar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Maamulka Hirshabelle ayaa waxaa gelinkii dambe Jimcihii shalay lagu dilay duleedka Magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Saraakiishan ayaa waxaa lagu dilay tuulada Mandheere oo 8km u jirta Magaalada Jowhar. Saraakiishan ayaa waxay la socdeen ciidan loo diray inay soo kormeeraan Webiga Shabelle oo ku fatahay tuuladaasi.
Wararka ayaa sheegaya in Saraakiishan oo shaqadooda ku guda jira ay si lama fillaan ahayd u soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab, oo halkaasi qaab dhuumaaleysi ah ku joogay.
Saraakiishan la dilay ayaa waxay kala yihiin Ku xigeenkii Taliyaha Ilaalada Madaxweynaha Hirshabelle, oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Dhiilow iyo saddex Sarkaal oo kale oo Ilaalada Madaxtooyada ka tirsan.
Taliyaha Booliska Hirshabelle, Xasan Dhicisow oo la socday ciidanka la weeraray ayaa la soo sheegaya in si dirqi ah uu weerarkaasi kaga badbaaday, iyadoona uu dib ugu laabtay Magaalada Jowhar.
Wararka waxay intaa ku darayan in maleeshiyadii Shabaabka ee weerarka gaystay ay dib uga carareen tuuladaasi, oo markii dambe ay gaareen ciidan xoogan oo kuwa Hirshabelle ah.
UPDATE: Maxaad ka ogtahay hadalka Cajiibka ah ee uu Aadan Barre Ducaale ka sheegay Xafladda caleema saarka Axmed Madoobe?
XOG XASAASI: Musharraxiin ka soo horjeestay guddiga farsamada doorashada Galmudug
TOOS U DAAWO Xafladda Caleema saarka Axmed Madoobe oo ka socota Kismaayo
14 qof oo ku dhimatay Shil gaari ka dhacay Somaliland
Muddooyinkii ugu dambeeyay Al-Shabaab ayaa culeys soo saaray Gobolka Shabellaha Dhexe, wixii ka dambeeyay markii laga soo saaray qaybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose.
Ururka Al-Shabaab ayaa jaray wadadii Jowhar iyo Balcad, Balcad iyo Muqdisho, iyagoo xilliyada qaarkood wadooyinkaasi ka gaysta weeraro gaadmo ah oo qaraxyana ay barbar socdaan.
Saraakiil lagu laayay duleedka Jowhar